Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment कलश किन सबै पूजामा राखिन्छ ? यस्तो छ धार्मिक कारण - Pnpkhabar.com
कलश किन सबै पूजामा राखिन्छ ? यस्तो छ धार्मिक कारण
पिएनपिखबर, भक्तपुर : हिन्दु धर्ममा कुनै पनि पूजा पाठ गर्दा कलश स्थापना गर्नु सबै भन्दा प्रमुख मानिन्छ। कलशको बारेमा एउटा मान्यता छ कि, यो सबै तिर्थ यात्राको प्रतिक हो। कलशमा सबै देविदेवाताको मातृशक्ति हुन्छ। यसको बिना कुनै पूजा पाठ पूर्ण हुन पाउदैन। त्यसैले आज हामी तपाईंलाई कलशसँग सम्बन्धित चाखलाग्दा कुराहरु बताउन जाँदैछौं।
कलशबाट जन्मिएकी थिइन् माता सिता
त्रेता युगामा राजा जनक जब खेतमा हलो जोत्दै थिए। त्यसै क्रममा जमिनको तलबाट कलश हलोमा ठोक्किएको आवज आयो । जब राजाले कलश निकालेर हेरे त्यसमा एउटी कन्या थिइन्। तिनै कन्याको नाम सिता राखियो।
यस बाहेक, अर्को पौराणिक कथा प्रचलित छ कि अमृत कलश समुद्र मंथनको समयमा प्राप्त भएको थियो। कलश मुख्य रूपमा माता लक्ष्मीका सबै फोटोहरूमा चित्रित गरिएको छ। यसै कारणले पूजामा कलश स्थापना गर्नु पहिल्यै देखि चल्दै आएको परम्परा हो।
जब पूजामा कलश स्थापित हुन्छ, यो विश्वास गरिन्छ कि कलशमा त्रिदेव र शक्तिहरु राखिएको छ। यसका साथै कलशमा सबै तीर्थयात्रा र सबै पवित्र नदीहरूको पनि हेरचाह गरिन्छ। सबै शुभ कार्यहरूमा कलश स्थापना गर्नु पर्ने नियम छ।
पूजामा सुन, चाँदी, माटो र तामाको कलश राख्न सकिन्छ। तर यो कुरामा ध्यान दिनुहोस कि पूजाको समयमा फलामको कलश राख्नु हुँदैन । कलश रातो कपडा, नरिवल, आम पात र कुशको सहयोगले तयार गरिन्छ। अष्टदल हल्दीबाट बनेको छ, जहाँ पूजा गरिरहेको बेला कलश स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चामल राख्नु पर्दछ । चामलमाथि कलश राख्नु पर्छ ।